IMITHI YEPALM POTTED KWIPATIO YAKHO - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Imithi yePalm Potted kwiPatio yakho
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwimithi yesundu ebunjiweyo yepatio yakho kubandakanya ezona ntlobo zintle zoyilo lwepatio enelanga. Naliphi na ipatio, nokuba yeyiphi na eyokuhombisa, inokuxhamla kwimithi yesundu embizeni. Kukho, ewe, loo mithi yesundu ibunjiweyo ifumaneka ngokulula kwikhaya lendawo kunye nakwivenkile yegadi, kodwa ngokubanzi kukho ukunqongophala okukhulu kweentlobo ezahlukeneyo, izityalo ezisempilweni, kunye nokukhetha ubungakanani.
Ngelixa ukongeza enye yezi ntendelezo ezinkulu zebhokisi zinokuboleka isandla esitshatyalaliswayo kuyilo lwakho, ubuhle bokwenyani bomthi wesundu wasekunene wepatio yakho buya kongeza umnxeba wokugqibela.
Eyona mithi ilungileyo yePatio Palm
Isitshayina fan Palm
Amatye ahlala emthunzini
Iintlobo zePlanga zemithi yesundu
Umhla wePygmy Palm
I-European Fan Palm
Unakekela njani iPatio Palms
Khetha umhlaba olungileyo
Sebenzisa isichumisi esineenjongo zonke
Khetha isitya esifanelekileyo
Izinketho ezimbalwa ezisisiseko zomthi wesundu zihlala zithi qatha engqondweni xa sicinga ngepatio egqibeleleyo enamagqabi aluhlaza kunye neentende, kodwa olu khetho alusoloko lungoyena ulungileyo unikezela ipatio yakho.
Ukuba yonke into oyifunayo sisundu esisiseko kunye neemfuno zokhathalelo oluncinci, jonga kwezi ndlela zilandelayo.
Olu hlobo lukhula kancinci kweminye imimandla, kodwa lwaziwa ngokuba neziqu zalo ezinde, ezinamagqabi athwala amagqabi amabi kakuhle.
Amagqabi abanzi anika ukubonakala kwendawo yokubaleka yesiqithi ngaphandle komsebenzi onzima wokumisa kunye nokuthenwa okugqithileyo.
Ubungangamsha besundu bukhula kakuhle kwindawo ezinomswakama kwaye bunokukhula bube ziimitha ezingama-80 ukuphakama.
Olu hlobo lwesundu lukwabizwa ngokuba yiRavenea Rivularis okanye umthi omkhulu wesundu.
I-Bushy kwaye idlamkile, ezi ntendelezo ziqaqambileyo ziluhlaza zilungele ubumfihlo, okanye njengelitye lembombo lakho Uyilo lwepatio . Ngokubanzi, iintende zeAreca zikhula ngokukhawuleza kwimozulu eshushu, ke imbiza enkulu kunye namanzi amaninzi kukhethwa ukuba i-Areca yonwabe.
Olu hlobo lwesundu lukwabizwa ngokuba yiDypsis lutescens, igolide yesundu, umsundu omthubi kunye nesundu sebhabhathane.
Ngamagqabantshintshi ayo ajonge ezantsi ajonge ezantsi, le ntendelezo iyimfuneko kuyo nayiphi na ipatio-goer ehamba rhoqo. Ukunyamezeleka kuninzi lweentlobo zomhlaba kunye neendawo zokuhlala ezilula, i-Chinese Fan Palm yindawo ekhathalela lula enokuthi ithathe imbalela kunye nemimoya.
ingoma yokudanisa emtshatweni
Isundu fan yaseTshayina saziwa njengeLivistona Chinensis kunye nomthombo wesundu.
Nangona uninzi lwesundu lonwabile kwilanga elipheleleyo ukuya kumthunzi okhethekileyo, kukho iintendelezo ezimbalwa ezikhula kwindawo enomthunzi.
Ngokubanzi, iintende ezinomthunzi zifuna ukuchumiswa rhoqo, kodwa iimveliso zesichumiso namhlanje zenza ukuba kube lula ngezichumisi.
Apha ngezantsi kukho ezinye zezona zikhetho zibalaseleyo zesundu kwindawo edume ngokuba nomthunzi okanye Uyilo lwepatio ebiyelweyo .
Amagqabantshintshi amnandi, anoboya asasazeke kwizikhondo ezixineneyo zesibheno. Olu hlobo luhlala lincinci kwaye lunamahlahla, olwenza ukuba isilingi yepatio esezantsi . Sebenzisa umhlaba otyebileyo otyebileyo kwizityalo eziluhlaza, namagqabi aluhlaza.
Le ntende yaziwa ngokuba yi-Chamaedorea seifrizii, inenekazi eliluhlaza okanye isundu somhlanga.
Ikwabizwa ngokuba yiRhapis Palm, ezi ntlobo zifuna ukukhanya okuncinci kakhulu ukuze zichume kwaye zibonakalise ukujikeleza kwamasebe aqatywe ngokukodwa, ngalinye linamagqabi atshizayo. Ifanelekile kwiipatio ezimnyama kwaye zifakwe ngaphakathi, le ntende yinto entle eluhlaza eluhlaza.
Ukuthwala ipateni yomlinganiso weklasikhi wonke umntu uyayithanda, i-Needle Palm yintando enomthunzi, iintlobo zeepygmy akunakulindeleka ukuba ziphume kwimida yepatio yakho. Ngelixa iintende ezininzi zifuna izityalo ezikhulu, i-Needle Palm iyakudinga igumbi elongezelelweyo kwinkqubo yeengcambu zayo ngokubanzi.
Le ntende inegama lenzululwazi leRhapidophyllum Hystrix.
Kwindawo ezifudumeleyo ezinelanga, iintende zihlala zikhula ziye kuphakama, nokuba zikhulile embizeni okanye emhlabeni. Ngaphandle kwesi sizathu sokukhula komthi wesundu, kukho iintlobo ezininzi ezikhula kwizikhongozelo nakwimozulu ekhulayo. Yiba nolindelo kwezi ntlobo zigqibeleleyo kwizikhongozelo kwimozulu eshushu nenelanga.
Ngaphandle kokuqhubela phambili, olu hlobo lolunye lwezona ntendelezo zibalaseleyo zokukhula kwizikhongozeli. Ukugcinwa kuncitshisiwe kwaye kunkcenkceshelwe, ezi ntlobo ziya konwaba endaweni enelanga kwipatiyo yakho. Inamagqabi amade, amade kunye nepateni yefeni yamagqabi, iPygmy Date Palm ilungile kwilanga elipheleleyo.
Ukunyamezela ilanga elipheleleyo kunye nobusika obubandayo, le ntlobo ithathwa njengenye yeentendelezo eziyinyani ezomeleleyo ukuza kuthi ga ngoku. Ukhathalelo lulula njengokususa amaflantshi afileyo kunye nokucheba iingcebiso ezimdaka ngombala, ngelixa unkcenkceshela ngokuphakathi kumaqondo obushushu apholileyo nakwindawo ezifudumeleyo.
Eyona idumileyo ngamaqoqo eziqhamo ezibomvu eziqaqambileyo, iManilla Palm yenye yezona ntlanga zilula ekunyamekeleni iipatios kunye neendawo zomhlaba.
Ubukhulu becala, olu hlobo luyacocwa, kwaye liza kuwisa awalo amagqabi asetyenzisiweyo njengoko esoma kwaye engasasebenzi. Tyala kumhlaba onesanti kancinci ukuze ufumane iingcambu ezisempilweni.
Igama lezesayensi lale ntende nguAdonidia Merrillii kwaye ikwabizwa ngokuba sisundu seKrisimesi.
Amarhe amaninzi malunga nokuxakaniseka kweentende kuye kwasasazeka kuluntu lwasegadini kule minyaka idlulileyo, kodwa iintende, njengezona zininzi zezityalo zangaphandle, zilula ukuzinyamekela.
Uninzi lwemithi yesundu ebunjiweyo yepatio yakho ifuna iiparameter ezifanayo, kodwa qiniseka ukuphanda iintlobo zakho ezithile ukuze ukhathalele ngokuchanekileyo iintende zakho zepatio.
Imithi yesundu ebunjiweyo yonke ifuna iimfuno ezifanayo ezisisiseko: amanzi, isichumisi, kunye nokukhanya kwelanga ngokwamaqondo ahlukeneyo. Funda ukuze ufumane iingcebiso ezifanelekileyo malunga nendlela yokugcina umthi wesundu owonwabileyo wonwabile.
iingoma zomsitho womtshato
Ukuze zombini isundu igcinwe isempilweni kwaye igcina ubuhle bayo buhle, sika amagqabi okanye amasebe ngokuchitha nje isiseko, malunga nesentimitha ukusuka kwisiqu sesityalo usebenzisa kuphela isikere esibukhali nesicocekileyo.
Nje ukuba igqabi liqale ukubonisa iimpawu zokubonakala, inokuba luphawu lokuba isundu alisasifuni igqabi kwaye liyakulahla kungekudala.
Umhlaba uyinxalenye ebalulekileyo yalo naluphi na uhlobo lokulima, kodwa ngakumbi kwisitiya segadi. Uninzi lweentlobo zesundu ziyakonwabela umhlaba otyebileyo otyebileyo kunye nezinto zentlabathi ukunceda ukulingisa imeko yendalo.
Unokuzama ukongeza ibhegi encinci yesanti eyongeziweyo kwingxowa enye enkulu yomhlaba otyebileyo. Umhlaba wesundu oxutywe kwangaphambili ngamanye amaxesha ufumaneka kwimimandla eshushu evela kwiivenkile nakwiivenkile zebhokisi.
Kulula ukuba intende yesundu ibuye ibuye iphume emanzini, kodwa ukuntywila emanzini ngamandla anokulimaza ngokusisigxina isundu.
Zama ukunkcenkceshela kwakamsinya nje xa umhlaba ebhodweni ubonakala womile, kodwa qiniseka, unokujonga ukufuma okusemhlabeni ngemitha okanye ngokumba nje iisentimitha ezimbini emhlabeni ukukhangela nawuphi na umqondiso wobumanzi. Ukuba kusekho ukufuma okungama-intshi ama-2 ngaphantsi komphezulu, isundu sinokulinda olunye usuku.
Ayizizo zonke iintende ezikhethiweyo malunga nesondlo, kodwa ukukhula ngokugqibeleleyo kunye nemiboniso emihle, sebenzisa isichumisi esineenjongo zonke kwisiqingatha samandla kwaye rhoqo rhoqo ngenyanga. Qiniseka ukuchumisa kuphela emva kokunkcenkceshela, ukuze ungatshisi iingcambu ngezinongo ezingaphezulu.
Kwiinjongo ezininzi zepatio, izikhongozeli ezinobungakanani obuphakathi zilungile. Nangona kunjalo, kwizityalo ezikhulu njengentendelezo, kufuneka inkqubo yeengcambu ezomeleleyo kakhulu, oko kuthetha ukuba bafuna igumbi leenyawo elaneleyo kwindawo yokutyala. Khetha isixhobo sokutyala kungekho ngaphantsi kokuphindwe kabini kubungakanani bembiza yezityalo ezithi zingene isundu.
Ukubhangqa iintende ezintle kunye neentyatyambo ezimibalabala kwenza ipatio entle, kodwa ulondolozo olufanelekileyo kunye nokhathalelo lweentende zezona zinto zibenza babe nomtsalane.
Isundu esicoceke kakuhle sinokujika ipatiyiti ekruqulayo ibe yindawo yokuphuma eparadesi yetropiki, ngakumbi kwizikhongozeli ezinkulu. Cinga ngendlela ongathanda ukuba ipatio yakho ijonge ngayo kunye nokhathalelo ocinga ukuba uza kulibeka ezintendeni zezandla zakho ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuba zeziphi iintlobo ezilungele wena.
Yeyiphi imithi yemithi yesundu oyithandayo kwipatio yakho? Sazise iingcinga zakho kwezi zimvo zingezantsi. Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela iphepha lethu imibono yokuma komhlaba entlango Apha.
Iivesi zebhayibhile zeentsikelelo zomtshato
iifutshane ezimnandi ngaye
Ukuprintwa kweentyatyambo zomtshato weendwendwe
indawo yokuhlala umlambo
iilokhwe ezintle zokubeleka zemitshato
ngubani onokwenza umtshato
Izipho zodadewabo womtshato